I-HDMI iletha ini kithi? | I-Huachuang Electronic
Cishe ziyizigidi eziyizinkulungwane eziyisishiyagalombili zamadivayisi anikwe ubuchwepheshe be-HDMI ezithunyelwe kusukela lapho kukhulunywa okokuqala kwe-HDMI ngoDisemba 2002. Ukucaciswa kwe-HDMI 2.1 yakamuva ngoNovemba 2017 kuyaqhubeka ukunika amandla ukuthuthukiswa kwezigaba zomkhiqizo omusha nezixazululo ezintsha zokuhlangabezana nesidingo esikhulayo sokusebenza okuphezulu kanye nokuhlangenwe nakho okuthe xaxa kwabathengi.
Ubuchwepheshe be-HDMI buyaqhubeka njengevidiyo ehamba phambili yedijithali, okulalelwayo nedatha okuxhuma imibukiso ephezulu yeincazelo ephezulu kububanzi be-elekthronikhi yabathengi, i-PC, iselula, izimoto kanye nezentengiso ze-AV. Iphinde yanda yaba yizixazululo ezivumela izimboni ezifana nokunakekelwa kwempilo, ezempi, indiza yezokuvakasha, ezokuphepha nokubhekwa, kanye nokusebenza kwezimboni.
Isimo semvelo somhlaba wonke samadivayisi axhunyiwe we-HDMI nezixazululo zifaka inethiwekhi yama-Admeter AdPters anelayisense, izikhungo zokuhlola ezigunyaziwe, abakhiqizi bezinto zokuhlola abagunyaziwe, abakhiqizi, abathengisi kanye nabafakeli.